प्रमुख सेनानी कवीन्द्रजंग थापा, जसले ‘साथीहरु’ को सुरक्षाका लागि कंगोमा प्राण आहूति दिए - Pardafas
नेतृत्व टुंगो नलाग्दा सर्वोच्च अदालतमा रोकियो सुनुवाइ
सिभिल ठगी प्रकरण : इच्छाराज तामाङको समूहलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन
अमेरिकामा पनि देखियोे ओमिक्रोन भेरियन्ट
Thursday, 02 December 2021 | २०७८ मङ्सिर १६, बिहिबार
प्रमुख सेनानी कवीन्द्रजंग थापा, जसले ‘साथीहरु’ को सुरक्षाका लागि कंगोमा प्राण आहूति दिए
नेपाली सेनाले आइतबार काभ्रेको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा यूएन डे मनायो । संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना दिवस ९अक्टोबर २४० का अवसरमा हरेक वर्ष नेपाली सेनाले केन्द्रमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
आइतबार केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा स्वदेशी तथा विदेशी अतिथिहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । यो कार्यक्रममा संयु्क्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ कंगोमा खटिएका तत्कालीन मेजर कवीन्द्रजंग थापाको परिवारले उनले पाएको डाग हम्मरस्कजोल्ड पदक सेनाले हस्तानान्तरण गरेकी थिइन् ।
केन्द्रमा एउटा सुन्दर भवन छ, कवीन्द्र कम्प्लेक्स । यो सुन्दर भवनको कथा भने उनै वीर योद्धा कविन्द्रसँग जोडिन्छ । सेनाका मानार्थ प्रमुख सेनानी थापा यूएन मिसनको क्रममा कंगोमा सहादत प्राप्त गरेपछि उनको स्मृतिमा यो भवन बनाइएको हो । सन् २००५ जुन २ मा उक्त घटना भएको थियो ।
तत्कालीन समय मेजर रहेका थापाको विद्रोही समूहद्वारा गोली हानी हत्या भएको थियो । त्यतिबेला कंगोमा सामूहिक बलात्कारको घटनाबारे अध्ययन गर्न मानवअधिकारको टोली आएको थियो । जब उक्त टोली दुई हेलिकप्टरबाट फर्किन लागेका थिए, त्यतिबेला अचानक ३५० भन्दा विद्रोहीहरुले चारैतिरबाट घेरेका थिए ।
त्यतिबेला मेजर थापाले उक्त टोलीको सुरक्षाको जिम्मोवारी लिएका थिए । त्यसकारण उनले सबैलाई सुरक्षित साथ हेलिकप्टरमा हालेपछि मात्र आफू अन्तिममा चढेका थिए । त्यतिबेला विद्रोही चलाएको गोली लागी उनी हेलिकप्टरको भित्र ढलेका थिए । त्यतिबेला शान्तिसेनाका अन्य दुई अधिकारी पनि घाइते भएका थिए ।
घटनापछि त्यतिबेला मानवअधिकार टोलकिो सदस्य रहेका कारमाइन कैमरिमले आफ्नो जीवनको लागि मेजर थापाप्रति सदैव ऋणी रहने जनाएका थिए ।
त्यसपछि थापाको स्मृतिमा पाँचखालमा भवन बनाइएको हो । सन् २०१६ मार्च ९ मा अमेरिकाले भवन निर्माण गरी नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यतिबेला सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए भने उनलाई तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एलिएना बी टपलिजले भवन हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
थापालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘डाग हम्मरस्कजोल्ड’ मेडलबाट पनि सम्मानित गरेको थियो । निकै प्रतिष्ठित मानिने यो मेडल संयुक्त राष्ट्रद्वारा सैन्यकर्मी, पुलिस या नागरिकलाई मरणोपरान्त दिइने गरिन्छ, जसले शान्ति अभियानको क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्छन् ।
आइतबारको कार्यक्रममा थापालाई प्रदान गरिएको ‘डाग हम्मरस्कजोल्ड’ उनका परिवारबाट केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै सेनाले पनि थापाको परिवारलाई कदरपत्रबाट सम्मानित गरेको छ ।
नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ ९विस २०१२ मङ्सिर २९० मा संयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य र दुई पर्यवेक्षक मुलुक छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्र परिसरमा झण्डोतोलनका साथै शान्ति स्थापना कार्यमा खटिने क्रममा निधन हुनेको योगदानको स्मरण गरी सम्मान प्रकट गरिएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा रक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, यहाँस्थित संयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक सारा बेइसोलो न्यान्ती, विभिन्न दूतावासका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागी थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पठाएर योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
द्वन्दरत मुलुकमा स्थापना भएका ४३ शान्ति मिसनमा रही एक लाख ३५ हजार ३९९ नेपाली शान्ति सैनिकले योगदान दिइसकेका छन् । हाल विश्वका १२ शान्ति मिसनमा रही १८१ महिलासहित पाँच हजार १६८ नेपाली शान्ति सैनिक परिचालित छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तर्फबाट पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा गौरव गर्न लायक योगदान भइरहेको छ ।
शान्ति स्थापनाका सिलसिलामा ६८ नेपाली सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन् भने ६६ गम्भिर घाइते भएको सेनाले जानकारी दिएको छ । अहिले शान्ति सैनिक धेरै संख्या पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल दोस्रो वरीयतामा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट माग भई आएमा नेपालले १० हजारको संख्यामा सैनिक पठाउन सक्ने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
एआईजी पालद्वारा हिरासतभित्र ‘पुस्तक कर्नर’ को शुभारम्भ
झापाका पंकजको ठगी धन्दा : सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यसरी गर्थे ठगी
कपिलवस्तुका सीमामा दुई दिन विशेष कडाई, अपराध नियन्त्रणमा नेपाल भारत सहकार्यगर्ने निर्णय
काभ्रेमा कुटपिट गरी आफ्नै बुबाको हत्या, छोरा पक्राउ
कांग्रेसले इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशन गर्दै, यस्ताे छ तालिका
मङ्सिर १६, २०७८
करोडौं रकम हिनामिनाको आरोपमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समाथि छानबिन सुरु
मङ्सिर १५, २०७८
सर्वोच्च अदालतमा लागू हुन लागेको गोला प्रक्रिया के हो ? केके छ फाइदा ?
कुमारी बैंक ऋण प्रकरण : बैंकका थप कर्मचारीको देखियो संलग्नता, प्रतिवादीको संख्या बढ्ने
मङ्सिर १४, २०७८
कांग्रेस जिल्ला अधिवेशन : ५७ जिल्लाको चुनाव सकिँदा कुन पक्ष अघि ? (सूचीसहित)